Ny fiangonana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Ny sary tsara tarehy ao amin'ny Baiboly dia miresaka momba ny Fiangonana ho ampakarin'i Kristy. Izany no resahina amin’ny alalan’ny fanoharana ao amin’ny soratra masina isan-karazany, anisan’izany ny Tonon-kiran’ny Fihirana. Hevi-dehibe iray ny Tonon-kira 2,10-16, izay nilazan’ny olon-tiany ampakarina fa tapitra ny ririnina, ary tonga ny fotoana hirahiraina sy hifaliana (jereo koa ny Hebreo. 2,12), ary koa izay lazain’ny ampakarina hoe: “Ahy ny namako ary azy aho” (Mt. 2,16). An’i Kristy ny Fiangonana, na isam-batan’olona na miaraka, ary an’ny Fiangonana Izy.
Kristy no Mpampakatra izay “tia ny Eglizy ka nanolotra ny tenany hamonjy azy” mba “ho fiaraha-monina be voninahitra ka tsy hisy pentina na fiketronana, na izay tahaka izany” (Efesiana). 5,27). Izany fifandraisana izany, hoy i Paoly, dia “zava-miafina lehibe, fa i Kristy sy ny fiangonana no ambarako azy” (Efesiana). 5,32).
Noraisin’i Jaona ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy io lohahevitra io. I Kristy mpandresy, ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra, dia manambady ny Ampakarina, dia ny Fiangonana (Apokalypsy 19,6-9; 21,9-10), ary miaraka mitory ny tenin’ny fiainana (Apokalypsy 2 Kor1,17).
Misy fanoharana fanampiny sy sary ampiasaina hamaritana ny fiangonana. Ny Fiangonana dia andian’ondry mila Mpiandry be fiahiana izay modely amin’ny fiahiany araka ny ohatr’i Kristy (1. Petrus 5,1-4); saha ilana mpiasa hamboly sy hanondraka izany (1. Korintiana 3,6-9); ny fiangonana sy ny mambra ao aminy dia tahaka ny sampany eo amin’ny voaloboka (Jaona 15,5); ny fiangonana dia tahaka ny hazo oliva (Romana 11,17- iray).
Ho taratry ny fanjakan’Andriamanitra ankehitriny sy ho avy, ny fiangonana dia toy ny voan-tsinapy maniry ho hazo izay itoeran’ny voro-manidina.3,18-19); ary tahaka ny masirasira mamakivaky ny koban’izao tontolo izao (Lioka 13,21), sns.
Ny Fiangonana dia tenan’i Kristy ary ahitana izay rehetra eken’Andriamanitra ho anisan’ny “fiangonan’ny olona masina” (1. Korintiana 14,33). Zava-dehibe ho an’ny mino izany satria ny fandraisana anjara amin’ny fiangonana no fomba itahirizan’ny Ray antsika sy hanohanana antsika mandra-pihavin’i Jesoa Kristy.